Rooble oo Madaxda Maamullada kala hadlay cabashooyinka jira | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble, ayaa Guddiyada Doorashooyinka Heer Dowlad-goboleed, ku war-galiyay in ay dusha ka saran tahay masuuliyadda hirgalinta doorashada Aqalka hoose, wuxuu ku boorriyay ka fogaanshaha siyaasadda horjoogayaasha maamullada.
MUQDISHO, Soomaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shir guddoomiyay kulan ay habka fogaan aragga ku yeesheen Golaha Wadatashiga Qaranka, kaas oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka.
Kulankaan oo qabsoomay wax yar kadib, markii uu soo gabagaboobay kulan dhex maray Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddiyada Doorashooyinka, ayaa hoggaamiyayaasha Maamullada, lagu war-galiyay walaaca ka dhashay kuraasta lagu boobay Dhuusamareeb iyo Baydhabo.
RW Rooble, wuxuu si weyn ugu celceliyay muhiimadda ay daahfurnaantu u leedahay doorashooyinka, wuxuu u mahadceliyay dowlad-goboleedyada bilaabay doorashada Golaha Shacabka, isagoo ka codsaday kuwa harsan in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan.
“Ra’iisul Wasaaraha ayaa madaxda Golaha Wadatashiga ku boorriyay sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashadu noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo, isagoo madasha u gudbiyay walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Horjoogayaasha, Puntland, Jubaland, iyo Hirshabelle, [Dani, Madoobe & Guudlaawe], oo aan wali guda-galin doorashooyinka Aqalka hoose, sababo la xariira dano shaqsi ah, ayaa Ra’iisul Wasaaraha u ballan qaaday in ay maalmaha soo aaddan bilaabi doonaan doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka.
Doorashooyinka guud ayaa ku billowday boobka kuraasta, taas oo sababtay in la qaadaco qeyb ka mid ah natiijada kuraasta qaar, Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, iyo Xallinta Khilaafaadka, ayaa war ka soo celshay dhowr doorsho oo cabsho uga timid.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa dhawaan Ra’iisul Wasaaraha la wadaagay walaac ku aaddan, daahfurnaan la’aanta ka jirta doorashooyinka dalka, iyagoo ugu baaqay inuu ugu danbeyn todobaadkaan qaado tallaabo muuqata oo xal keeni karta.
Puntland iyo Jubaland, ayaa dib u dhigaya doorashada kuraasta Golaha Shacabka, waxayna Xukuumadda ka sugayaan lacago hore loogu ballan qaaday maamullada, halka Hirshabelle, la filayo in dhawaan la shaaciyo lambarrada kuraas xiran oo uu ku jiro midka uu boobayo eedeysane Fahad Yaasiin.